Maalinta: Maarso 4, 2019
MMO Shirkadda Laanta Socdaalka ee Bursa ee Nidaamka Isgaadhsiinta ee Bursa
TMMOB Rugta injineerinka farsamada Bursa Laanta Hawlgabka Firfircoon ee ay sameeyeen odayaasha xirfaddan, asxaabta yar yar si ay ugu gudbiyaan khibradahooda asxaabta yar yar sii wadaan. Wareysiga oo cinwaan looga dhigay ler Rail Systems ee Bursa Makina, injineerinka injineerka Taha Aydın [More ...]
Goorma ayaa la furayaa Kirazli-Bakirkoy IDO Metro Line?
Kirazli Bakirkoy IDO Metro Line, oo ay shacabku si weyn u sugayaan, waa la dhammeysan doonaa, waa la furi doonaa, xaggee ayey aadi doontaa, maxay yihiin joogsiyada, marinnada iyo saldhigyada? Jiritaanka Kirazlı-Başakşehir / khadka metro line 2. masraxa. Woqooyi markii khadka la dhammeeyo [More ...]
Fidinta iyo Diyaarinta Wadooyinka Muhiimka ah ee Yolçatı Result Result Result Result Maamulka Maamulka Tareenka ee 5. Agaasinka Iibsiga Gobollada (TCDD) ee 2018 / 707199 GCC oo leh qiyaasta qiyaasta 6.803.323,16 TL. [More ...]
Gebze Halkalı Soodhawrka Dhulka Sababa La socoshada Maamulaha Guud ee TCDD
Maareeyaha guud ee TCDD, Ali İhsan Uygun, wuxuu sii wadaa 3. iyo 4. Waxaa la baaray goobta-dhismaha khadka tareenka. Uygun, iyo Necdet Sümbül, oo ah Agaasimaha Guud ee AYGM dhammaadka usbuuca, [More ...]
Waxay ku taalaa wadada isku xirta Ankara - Eski ,ehir, Malıköy waa xarunta dejinta ee degmada Polatlı. Markii la baaro macluumaadka taariikheed iyo dukumiintiyada, xarunta tareenka ee ku yaal gobolkaan, halkaas oo halgankii halganka ahaa ee Fagaaraha Beerta Sakarya, uu maray, [More ...]
KGM's 69. 500 Fidinta waxay la kulmeysaa Goobta Xasilinta Sannadka Dhismaha
Agaasinka guud ee Wadooyinka waaweyn. Munaasabad lagu maamuusayay ayaa lagu qabtay Akıncı Isweydaarsiga Jimcaha ee Maarso si loogu xuso Sannad-guurada Ururka. Maareeyaha Guud Abdulkadir URALOĞLU, Kuxigeenka Maareeyayaasha Guud, Madaxda Waaxaha iyo Wadooyinka Waaweyn [More ...]
Duqa Magaalada Konya iyo Musharaxa Madaxweynaha Jamhuuriga ee Tartanka Murashaxa Duqa Magaalada Konya Ugur Ibrahim Altay, waxay diyaarinayeen barnaamijyo cusub oo cusub oo loogu talagalay Konya, My City waxay la wadaageen barnaamijka dadweynaha. Xarunta Selçuklu Congress [More ...]
Madaxweyne Aktas oo ku dhawaaqay mashruucyo ay kuqorayaan Bursa ilaa mustaqbalka
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş wuxuu soo bandhigay mashaariicda ay ka hirgalin doonaan wajiga cusub ee dhamaan aaga safarada ilaa dalxiiska, magaalada iyo deegaanka ilaa dhaqanka, fanka iyo isboortiga. Madaxweyne Aktaş, 20 54 ayaa la qabtaa sanad walba [More ...]
Qofna ma arki doono dhismaha cusub ee mitrooga laga sameeyo Gürsu ilaa Çalı!
Xaqiiqadan waa mid cad… Qaaciddada xalinta dhibaatada gaadiidka ee Bursa waxay ku jirtaa nidaamka tareenka. Bursaray waa qeybta ugu weyn ee gaadiidka. Halkaa marka ay marayso, Khadadka Burs Bursaray oo ka bilaabma Jaamacadda Uludağ ee Wadada İzmir iyo Emek oo ku taal Wadanya Mudanya waxay ku yaalliin Acemler. [More ...]
Turkey Baaskiil Federation iyo taariikheed ee Kobenhagen World Midowga Baaskiil in dhibcood si ay kulan Olympic ee Tokyo 2020 iyo tartanka Velo Mountain Bike tartanka ugu dambeeyey ee taxanaha ah by Camp Forest Incekum Alanya abaabulay [More ...]
Gebze ayaa laga filayey xNUMX Halkalı Tirinta Maalinta La Qabto Maalmaha Sabtida
Gebze Halkalı Taariiqda bilowga ee tareenka tareenka ayaa ahaa mid cad. 2013 ayaa xiran tan iyo markii tareenka uu ahaa mid xiiso leh markii la furi doono. Waa hagaag, Gebze Halkalı Waa maxay taariikhda furitaanka khadka Marmaray [More ...]
Ma jiraan diiwaanno qarsoodi ah 04.03.2019 nidaamkayaga
Alparslan Turkes Bridge Bridge Isbedelka Maanta
Dowladda Hoose ee Manisa 83 milyan oo ginni oo ay maal gelisay degmada Turgutlu Alparslan Türkeş Bridge Junction, 4 Maarso Isniinta, xafladda 12.30'da ayaa furi doonta. Martiqaad dhamaan dadka Manisa iyo dadka reer Turgutlu furitaanka [More ...]